World Nutella Day 2022 - ကမ္ဘာ့နူတဲလားချောကလက်နေ့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ
World Nutella Day 2022 (ကမ္ဘာ့ Nutella နေ့)0396
ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်မယ့် ကမ္ဘာ့ Nutella နေ့ကို Shop App MM မှဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသောအားဖြင့် Nutella ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းကို ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Blog အစီအစဉ်မှာ ဗဟုသုတရဖွယ် တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မကြာမီရောက်ရှိတော့မယ့် ချစ်သူများနေ့ (Valentine’s Day) မှာ မိမိချစ်ခင်ရသူများကို ချိုမြိန်သောချစ်ခြင်းများစွမ်းနိုင်ပေးဖို့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး chocolate spread Nutella ကို Shop App တွင် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီး ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
🍫 Nutella ဖြစ်ပေါ်လာပုံ 🍫
၁၈၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် အီတလီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ ပီယက်ဒ်မောက် (Piedmont) ဆိုတဲ့မြို့လေးမှာ ချောကလက်အနှစ်နဲ့ ဟေဇယ်အခွံမာသီးပြုလုပ်သူအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုကာလတွင် ဟေဇယ်အခွံမာသီးပေါများသော်ငြားလည်း ချောကလက်ပြုလုပ်ရာတွင်သုံးတဲ့ ကိုကိုးသီးကတော့ အလွန်ရှားပါးခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်‌နှောင်းပိုင်းကာလတွင် ကိုကိုးသီးသည် ပိုမိုရှားပါးလာခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်တွင် ပီယက်ဒ်မောက်မြို့ရှိ မုန့်ဖုတ်သမား ပီယက်ထရိုဖာယဲရို (Pietro Ferrero) ဆိုသူက ဂျီယန်ဒူရော့ (Giandujot) ဆိုတဲ့ ချောကလက်အနှစ်သုတ်ထားတဲ့ပေါင်မုန့်ကို တီထွင်ခဲ့ပြီး နာမည်ကြီးလူကြိုက်များကာ အောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ ထို့မှတစ်ဆင့် ၁၉၄၆ တွင် ဖာယဲရိုကုမ္ပဏီ (Ferrero Company) ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၆၄ တွင် ပီယက်ထရိုဖာယဲရို ရဲ့ သားဖြစ်သူ မစ်ကယ်လီဖာယဲရို (Michele Ferrero) ဆိုသူက “နူတဲယ်လား” – Nutella ဟု အမည်ပေးထားတဲ့ ဟေဇယ်သစ်ကြားစေ့ပါဝင်သော ချောကလက်အနှစ်ကို ဖန်ပုလင်းပုံစံနဲ့ ထုတ်လုပ်ပ်ခဲ့ပြီး ထိုထုတ်ကုန်သည် အဲဒီ့အချိန်မှစတင်ကာ အီတလီနိုင်ငံမှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း နာမည်ကျော်လူကြိုက်များလာခဲ့ပါတယ်။
Nutella နဲ့အတူ ဖန်တီးစို့ ..
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး chocolate spread Nutella ကို ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီး ဝယ်ယူလိုက်ပါ။
🍫 ကမ္ဘာ့ Nutella နေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံ 🍫
အစားအသောက်ဆောင်းပါးရေးသားသူလည်းဖြစ်၊ Nutella အမာခံပရိတ်သတ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်လူမျိုး ဆာရာရော့်စ်ဆို (Sara Rosso) က Nutella ကို အီတလီနိုင်ငံတွင် စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် Nutella အမှတ်တံဆိပ်သည် ကမ္ဘာ့အထိမ်းအမှတ်နေ့ရှိထိုက်တဲ့ ထုတ်ကုန်ဟုသတ်မှတ်ကာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့မှစတင်၍ ကမ္ဘာ့ Nutella နေ့အဖြစ် သူမကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ သူမ၏ပရိတ်သတ်နှင့် Nutella ပရိတ်သတ်များကလည်း သူမ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အားပေးထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဆာရာသည် ကမ္ဘာ့ Nutella နေ့ကို အဒွန့်ရှည်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး ဖာယဲရိုကုမ္ပဏီကို တရားဝန်ပြောင်းလွှဲပေးအပ်ခဲ့သည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ကို ကမ္ဘာ့ Nutella နေ့အဖြစ် တရားဝင်သတ်မှတ်ပြီး ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားတွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပလျက်ရှိသည်။
ချိုမြိန်သောနေ့ရက်တိုင်းကိုဖန်တီးဖို့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး chocolate spread 100% authentic Nutella ကို Shop App တွင် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီး ဝယ်ယူလိုက်ပါ။
At the end of World War II, cocoa was once again difficult to come by.
Pastry Maker, Pietro Ferrero, made loaves of this sweet chocolate paste and called it Giandujot. Soon after, the Ferrero Company was founded on May 14, 1946.In 1951, Ferrero made the paste intoaspreadable form.
In 1964 Ferrero’s son Michele gave the jar of creamy hazelnut and cocoa the name Nutella. The product is popular throughout the world.
Spread Love with Nutella!
Grab the world’s best chocolate spread, Nutella here!
How did World Nutella Day become?
World Nutella Day was established on February 5th, 2007, by Sara Rosso, an American blogger andaNutella enthusiast. She first discovered Nutella while living in Italy asafood blogger and she thought Nutella deservesaworldwide celebration day, and all Nutella lovers agreed! They began celebrating Nutella by sharing pictures, ideas, inspiration, and recipes on social media. Later in 2015, Sara transferred World Nutella Day to the makers of Nutella, Ferrero, so that it could live on and grow for years to come.
That’s how World Nutella Day becameaglobal phenomenon.
We always suggest celebrating World Nutella Day with your loved ones,afriend, family, orapartner. Celebrations are best when shared. Don’t have any Nutella? Shop App MM offering 100% authentic and the best Nutella in town. Check Here!
ChocolateChocolate SpreadDarazDaraz MMNutellaShop AppShop App MMShop MMshop.com.mmWorld Nutella Day
Previous Article၂၀၂၂ တရုတ်ရိုးရာ ၁၂ လရာသီခွင်ဟောစာတန်းနှင့် ဒဏ္ဍာရီဖြစ်ပေါ်လာပုံ – Lunar Zodiac Prediction & MythNext Article၁၂ လရာသီခွင်တွေကပြောမယ့် ၂၀၂၂ ရဲ့ သင့်အချစ်ရေး